Afrika Mainty · Aogositra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Aogositra, 2013
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Aogositra, 2013
Zimbaboe: Mbola Te-Ho Filoha Fanimpitony Ny Filoha Mugabe
Zimbaboe 25 Aogositra 2013
I Mugabe no hany filohan'ny firenena hatramin'ny nahazahoany ny fahaleovantenany tamin'ny 1980.
Benin 14 Aogositra 2013
Mahazo vahana ao Benin ny Alarobia Mena. Manazava ny anton'izany i Sinatou Saka.
Etazonia 13 Aogositra 2013
Etiopiana Miozolomana Nosamborina sy Nodarohina Nandritra Ny Fihetsiketsehana Eid El-Fitr
Etiopia 11 Aogositra 2013
Ao anatin'ny fihetsika mahery vaika atao amin'ireo Miozolomana ao amin'ny firenena, nanao famoretana tamin'ireo Miozolomana Etiopiana nanao fihetsiketsehana milamina nandritra ny fety manamarika ny fiafaran'ny Ramadany ny polisy.
Zimbaboe 09 Aogositra 2013
Voalaza fa olona roa tapitrisa efa maty no voasoratra ato amin'ny lisi-pifidianana ao Zimbabwe'. Niantso ny hanaovana fanamarinana mahaleotena i Botswana.
Mitady Ainga Vaovao Amin'ny Alalan'ny Fisafidianana Filoha Amin'ny Roa Farany Tavela i Mali
Mali 08 Aogositra 2013
Nitrangana krizy niainga avy amin'ny fanonganam-panjakana i Mali herintaona sy tapany lasa izay. Efa amin'ny dingan'ny fifidianana kosa ry zareo ankehitriny ary miditra amin'ny fiodinana faharoa. Manao ahoana moa ny hevitr'ireo any Mali sy ny Maliana manoloana ny toe-javatra atrehin-dry zareo amin'izao fotoana izao? Rakotomalala no nandrafitra ny lahatsoratra.